WAREYSI “Aniga Dalka Anigaa ka Taliya,Cida Talisa iyagu Ha Sheegaan..” Madaxweyne Siilaanyo | HAYAAN NEWS
WAREYSI “Aniga Dalka Anigaa ka Taliya,Cida Talisa iyagu Ha Sheegaan..” Madaxweyne Siilaanyo
Hargeysa(Hayaannews):-Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa markii ugu horreysay sheegay inaanay jirin cid kale oo masuuliyadda isaga loo doortay ee hoggaaminta ah la maamushaa, balse uu isagu dalka ka taliyo oo talada gacanta ku hayo, waxna aanay ka jirin wararka sheega inaanay talo gacanta ugu jirin ee Maamulka Cid aan loo doorani gacanta ku hayso.
Waxa uu Madaxweyne Siilaanyo ku dooday inkasta oo uu Mucaarad iyo Muxaafid iyo guud ahaan Dalka Somaliland Madaxweyne u yahay oo uu u siman yahay, haddana uu xaq u leeyahay inuu taageero Xisbiga uu ka tirsan yahay ee Kulmiye, Sharci iyo Xeer u diidaya inuu taageeraana jirin oo uu yahay Xisbigii laga soo doortay, waxaanu sheegay inuu Mucaaradka ugu baaqayo inay shakiga iska saaraan oo ay kalsooni ka filaan doorashada Madaxtooyada ee soo socota.
Madaxweyne Siilaanyo oo ka jawaabay su’aalo kooban oo uu weydiiyey Weriye ka tirsan TV-ga iyo Idaacadda Afka Xukuumadda Somaliland ku hadla ee TV-ga Qaranka iyo Idaacadda Radyoow Hargeysa, waxa uu sheegay inuu Caafimaadkiisu fiican yahay, isla markaana dalka uu isagu ka taliyo ee cid kale “Dalka Aniga oo talada isaga loo doortay ee hoggaaminta gacanta ku haysaa jirin, balse ay jiraan Dad Masuuliyiin ah oo la shaqeeyaa.
Madaxweyne Siilaanyo oo mar kale la weydiiyey inay Mucaaradku ku eedeeyaan inaanu waajibaadka Xilkii loo doortay Madaxweyne ahaan sidiisa u gudan ee ay jiraan Dad aan la dooran oo Mus-dambeed ah oo talada dalka qayb ka ah, waxa uu ku jawaabay; “Dalka xilka iyo masuuliyadda iga saaran cidna ugama dambeeyo, xilka iyo waajibka isaaran waan ka soo baxaa, shaqadaydana waan haystaa, Illaahay mahaddii si fiicanna way iigu socotaa, meel fiican bay hawshu maraysaa, waa la wada shaqaynayaa, hawsha waa loo soo wada jeedaa, keligay maaha ee waa la ila shaqaynayaa, aad iyo aad baanan ugu mahad-celinayaa Dadka ila shaqaynaya iyo Dadka had iyo jeer u soo jeeda inay u halgamaan dalkan xorriyaddiisa iyo madax-bannaanidiisa.”
“Axsaab baynu nahay, dal dimuquraaddi ah baynu nahay, Xisbi baan ka tirsanahay, haddaanan Xisbigayga Musharrixiisa taageerin yaan taageeri lahaa? Dabcan Dadka waan u simanahay marka si loo eego, laakiin haddana Xisbigayga Musharrixiisa waan taageerayaa.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland oo la weydiiyey in Dadka qaar ku dhalliilaan inuu Xisbiga Kulmiye taageerayo.
Haddaba, Su’aalaha la weydiiyey Madaxweynaha Somaliland Axmed-Siilaanyo iyo Jawaabaha uu ka bixiyey-ba siday u dhaceen, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan Hoose ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-